मन्त्री हृदयराम थानीले भने- ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज गरौ’ – Himalaya TV
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १४:१७ क्यानडाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा ६.८ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:५५ नेपाली महिला फुटबल टोली थाइल्याण्ड प्रस्थान
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:५१ दशैं बिदामा सर्वोच्चमा ८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:२६ टिप्पर पल्टिँदा एकको मृत्यु, दर्जन बढी घाइते
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:१९ कपिलवस्तु: थप पाँच घण्टाका लागि कर्फ्यू हट्यो
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १२:५९ सोमबार पनि टीका लगाउन बालुवाटार पुगे कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण
Home » समाचार » मन्त्री हृदयराम थानीले भने- ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज गरौ’
मन्त्री हृदयराम थानीले भने- ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज गरौ’
१२ चैत्र २०७३, शनिबार ०८:४५
काठमाण्डौ, १२ चैत्र । सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् ।
करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ ।
गरिबी निवारण कार्यक्रमविहीन भएपछि मन्त्रालय राख्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री हृदयराम थानीले गुनासो गरेका छन् । थानीको गुनासो छ, ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयको सञ्चालन गरौं भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्ने ? खारेज गरे हुन्छ ।’
गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, किसानलाई पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य विमाजस्ता कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । दातृनिकाय, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम पनि आफ्नो मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्ने मन्त्री थानीले बताए । ६ महिनादेखि गरिबसम्बन्धी सबै कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्न विकास परिषद्को ३७ औं बैठकदेखि निरन्तर माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कर्मचारीको पनि कमी छ । ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोे यो मन्त्रालयमा ५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय गठन भएको करिब साढे चार वर्षमा सातजना सचिव फेरिएका छन् ।
मन्त्री हृदयराम थानीले भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज गरौ ।
गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरौँ भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्ने ? खारेज गरे हुन्छ । यो खबर आजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।
क्यानडाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा ६.८ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १४:१७
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:५५
दशैं बिदामा सर्वोच्चमा ८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:५१
टिप्पर पल्टिँदा एकको मृत्यु, दर्जन बढी घाइते
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:२६
कपिलवस्तु: थप पाँच घण्टाका लागि कर्फ्यू हट्यो
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:१९